Hordhaca kulanka horyaalka Premier League ee Kooxda Manchester United ay booqanayso West Ham United – Gool FM
Xiddig hore ee kooxda Liverpool ah oo ku booriyay James Maddison in uu iska diido dalabka kaga imaanaya Man United
Kooxaha Man United, Tottenham iyo Borussia Dortmund oo isku haysta xiddig ka tirsan Juventus
Kooxda AC Milan oo wadahadal la furatay mid ka mid ah xiddigaheeda si ay uga horjoogsato inuu aado Man United
Kooxaha Man United, Man City, Liverpool, Real Madrid, Inter, Juve & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa la ciyaari doonto
Hordhaca kulanka horyaalka Premier League ee Kooxda Manchester United ay booqanayso West Ham United
Haaruun September 22, 2019
(London) 22 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa galabta booqanaysa naadiga West Ham United kulan ka tirsan horyaalka Premier League.
Goolhaye David De Gea ayaa xiddigaha kooxdiisa Manchester United uga digay in kulankan ay la leeyihiin West Ham United uu noqdo mid la mid ah kii ay kal ciyaareedkii hore 3-1 uga akaatay Hammers.
Red Devils kuwaasoo uu watay tababare Jose Mourinho waqtigaas ayaa guldarradaas xanuunka badan ay ka soo gaartay safkii uu watay tababare Manuel Pellegrini.
Taariikhda: Axad, 22 Sept 2019
West Ham United ayaa ganaax ku weynaysa kulankan daafaca garabka bidix ee Arthur Masuaku kaddib markii laga saaray oo uu kaarka cas guddoomay kulankii ay la ciyaareen Aston Villa, halka Manuel Lanzini xilli dambe la marsiin doono tijaabo lagu ogaanayo inuu diyaar u yahay kulankan iyo inkale.
Michail Antonio iyo Winston Reid ayaa muddo dheer garoomada ka maqnaan doona, iyadoo kooxda Hammers lagu naanayso aysan heli doonin adeegooda muddooyinkan.
Dhinaca kale Manchester United ayaa ku rajo weyn in Daniel James uu dib uga soo laaban doono dhaawac uu la maqnaa oo ka soo gaaray kulankii todobaadkii hore ay la dheeleen Leicester.
Labada ciyaaryahan ee reer France, Paul Pogba iyo Anthony Martial ayaysan u badnayn inay taam u noqdaan kulankan, halka Luke Shaw iyo Eric Bailly ay la sii maqnaan doonaan dhaawacyada ay qabaan.
Weeraryahanka da’da yar ee kooxda Man United, Mason Greenwood ayaa filanaya inuu safka hore ee kulankan ku soo bilowdo kaddib markii uu goolkiisii ugu horreeyey kooxda waa weyn ee United uu dhaliyey kulankii Europa league oo ay guusha ka heleen habeenkii Jimcaha naadiga Astana.
>- West Ham ayaa guul gaartay labo ka mid ah afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay garoonkeeda ku wajahday Man Utd, labada kulan oo kalena mid barbaro ayay la gashay midna waa laga badiyey, waana in ka badan intii ay sameeyeen 19 kulan markaas ka hor kulammada ay United tartankan kula ciyaareen, markaasoo ay kala kulmeen 2 guul, 9 barbaro iyo 8 guuldarro.
>- Manchester United ayaa goolal badan ka dhalisay kooxda West Ham United kulammada horyaalka Premier League, waana in ka badan koox kasta oo kale oo ay kaga hortagtay tartankan iyadoo ka dhalisay 94 gool.
>- Kooxda Manchester United ayaa kaliya guuldarro la kulantay labo ka mid ah 21-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay la ciyaartay West Ham waxaana ay ka haysataa.. (14 guul, 5 barbaro iyo 2 guuldarro), waxaana ay ku guuldarreysteen inay gool dhaliyaan kaliya labo kulan oo ka mid ah kulamadaas, waana kulan 0-0 ku dhammaaday bishii December 2015 & mid kale oo isna goolal la’aan 0-0 ku dhammaaday oo ay la dheeleen bishii May ee sanadkii 2018.
>- West Ham United ayaa guuleysatay kaliya saddex ka mid ah 20-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo ay wajahday kooxaha sare ee horyaalka oo loo yaqaan ‘big six’, waxaana ay ka haysataa 3 guul 6 barbaro iyo 11 guuldarro, mid ka mid ah guulahaas ayaa yimid iyagoo London Stadium kula ciyaaraya Man United bishii September sanadkii 2018, markaasoo ay ku adkaadeen 3-1.
>- Kooxda West Ham United ayaa 48 dhibcood ka heshay 30-kii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waxaana ay 30-kaas kulan heshay 14 guul, 6 barbaro iyo 10 guuldarro.
>- Xiddigaha safka hore ugu soo bilowda Manchester United ayaa cel-celis ahaan da’doodu tahay 25 sanadood iyo 51 maalood, waa kuwii ugu da’da yaraa ee Premier League ku soo bilowda xilli ciyaareedkan, iyagoo xitaa ka da’yar safkii ay Manchester United ku soo bilowday Premier League xilli ciyaareedkii 1995-96, kuwaasoo jiray cel-celis ahaan 25-sano iyo 345 maalmood.
>- Tan markii uu bilowday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, Manchester United ayaa loo dhigay ama qaadatay 16 rigoore, waxaana ay dhalisay 11 gool ku laad, halka laga qabtay 5 rigoore, waana in kabadan koox kasta oo kale horyaalka Premier League.
>- Tababaraha kooxda West Ham ee Manuel Pellegrini ayaa ka guuleystay horyaalka Premier League kulamo uu ka hortagay saddex macallin oo kala duwan oo Manchester United watay waana David Moyes, Louis van Gaal iyo Jose Mourinho, waxaana uu Manuel Pellegrini maanta noqon karaa tababarihii ugu horreeyey ee tartankan ku garaaca afar tababare oo ka duwan oo horkacaya kooxda Red Devils lagu naanayso.
MA OGTAHAY: In xiddig Magaciisa yahay Xubinta Taranka Dumarka uu ka ciyaaro Premier League (Tabiyeyaasha qaarkood oo quus ka jooga magaciisa)
Horudhaca kulanka Premier League ee Kooxaha Arsenal iyo Watford… (Gunners oo u baahan inay ka fogaato in rigoore laga dhaliyo)